"THE only thing certain about life is DEATH"
တလောက သက်တူရွယ်တူ တန်း အသိ တယောက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည် အရင်ကလည်း ရောဂါ ထူးထူးထွေထွေ ဖြစ်သံ မကြားခဲ့ .. ဗြုံးစားကြီး ပါဘဲ ... သွားနှင့်လေဦး ..
ငယ်သူငယ်ချင်း တွေနှင့် ကျောင်းနေဘက်တွေ ထဲကလည်း အတော်ပါ ကုန်ပြီး ဖြစ်သည် ..
ငယ်သူငယ်ချင်း စိုးလွင်၊ ထွန်းလွင်၊ ဂျော်နီ .. မောင်သင်း .. တို. သွားနှင့်ကြပြီ ...သွားနှင့်လေဦး ...
မန်းတက္ကသိုလ် တက်ဖက် ကျောက်ခဲ တွေထဲ က .. အရင်ဆုံး ဆုံးသွား တာက တောင်သာသား ဇင်လှိုင် .. အသည်းရောဂါ .. နှင့် ဆုံးတော့ အသက် ၂၄နှစ် လောက်ဘဲ ရှိဦးမည် .. သူငယ်ချင်း ရဲ့နောက်ဆုံးခရီး ကိုတော့ ရန်ကုန် မှာရှိနေတုံး လိုက်ပို့ ခွင့်ကြုံ လိုက်သည်။ သွားနှင့်လေဦး ဇင်လှိုင် ရေ..
Same Batch တွေထဲ က သိရသလောက် .. ကသာ ကိုအောင်ဝင်း .. တောင်တွင်းကြီး က အောင်ကြီး (MOGE)၊ ဗန်းမော် က ဖိုးချို (ဘဓရ ကွင်းဆင်းရင်းဆုံး).. တိုက်ပွဲ ကျသွားတဲ့(ဗိုလ်ကြီး) ဌေးမင်းထွန်း ... တောင်သာ ကျောက်ကာရွာက မြင့်ဆွေ .. ကန့်ဘလူ က ကိုမြအေး ..မန္တလေးသား ကိုမျိုးခင် .. နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ နှင့် အဆက်ပြတ် ကုန်ခဲ့သည်။
ခု နောက်ဆုံး သိရသလောက် က မြင်းခြံသား နိူင်ဖေ .. သူလည်း အသည်းရောဂါ နှင့် ဆုံးပါးခဲ့သည်။ သူ့ ရွှေရတုမှတ်တမ်း ဘလောက် မှာ သွားဖတ် ရင်း ကနေ ပြန်ဆုံသွား ခြင်းဖြစ်သည်။ နိူင်ဖေ အကြောင်း သတိတရ နှင့် အမှတ်ရ သလောက် အနည်းငယ် ရေးကြည့် ချင်ပါသည်။
သူနှင့် စခင်ရတာ မန်းတက္ကသိုလ် ဘူမိဗေဒ ဒုတိယ နှစ်သို့ မကွေး ကောလိပ် မှ Transfer ဖြင့် ရောက်လာပြီး .. ကျောက်မဲ မှ ကျနော် နှင့် အမျိုးတော်စပ်သူ မိန်းခလေးတယောက် ကို သူ နောက်ပိုး ပိုးရာ တွင် ကျနော်က ထောက်ခံမဲ ပေး သည့် အနေနှင့် လူလုံး လိုက်ပြပေး ရတာက နေ .. ပိုခင်သွား ကြခြင်း။ သူ့ကို ပေါ်တူဂီ ဟု နောက် ပြီးခေါ်ကြသည်။ " နိူင်ဖေ က ... အလောင်းဘုရား သံလျင် က ငဇင်ကာ့ နောက်လိုက် တွေကို ဖမ်းခေါ်လာတော့ .. အဲဒီ ပေါ်တူဂီ တွေ အညာသူတွေ နှင့် အိမ်ထောင်တွေ ကျပြီး ပေါက်ဖွား လာတဲ့ မျိုးဆက်တွေ ထဲ ကကွ .. သူ့မျက်နှာ ကြည့်ပါလား ပေါ်တူဂီ ပုံ" .. ဟုတ်လေသည် မဟုတ်လေသည် မသိ နိူင်ဖေ ကတော့ ခတ်ပြုံးပြုံး လုပ်နေခဲ့သည်။
စင်္ကာပူ မှာ အလုပ်လုပ် ခဲ့သေးသည်.. ဂရင်းကဒ် မဲပေါက် လို့ အမေရိကန် ရောက်နေကြောင်း ဖုန်းထဲ ကနေ သူပြောပြပါ သည် ..
သူ အသည်း ရောဂါ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖုန်းထဲမှာ ပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ "ငါဖြစ်တာ ဇင်လှိုင့် လိုကွ .. ဒါပေမဲ့ ခု ဗမာဆေး တွေနဲ့ သက်သာနေလို့ ဒီက ဆရာဝန်တွေ တောင် အံ့သြ နေကြတယ်"
နောက်ပိုင်း သူ့အားနာ ကိုယ့်အားနာ နှင့် ဖုံးမဆက် ဖြစ်တော့ ... နိူင်ဖေ ဆုံးပြီ ဆိုတာကြားတော့ အတော် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားရသည်။ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်း ထဲမှ .. နောက်ပိုင်း အဆက်သွယ် မပြတ်ခဲ့သူ .. ကျနော့် ရေးတင်တဲ့ ပိုစ့် တွေ ကို ကွန်မင့် အမြဲ လာရေး ပြီး အားဖြည့်ပေးခဲ့သူ ... သွားနှင့်လေဦး .. ပေါ်တူဂီ ရေ ..
သွားနှင့်လေဦး သူငယ်ချင်း တို့ ရေ ...... အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း နှင့် သေဆုံးခြင်း အကြားမှာ မျဉ်းပါးပါး လေး တကြောင်းလေးဘဲ ခြားထား တာပါ ။ အဲဒီ မျဉ်းလေးဟာလည်း မှိန်မှိန်ပါးပါး လေးမို့ ...အချိန်မရွေး လည်း ပျက်သွား နိူင်တာ မို့ ....
သွားနှင့်လေဦး သွားနှင့်လေဦး ပြောရင်း နူတ်ဆက်ရင်း ..
နောက်လှည့် ကြည့်လိုက်တော့ ... ကိုယ့်နောက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ တော့ ...
Posted by mks at 9:31 PM No comments: Links to this post
တောင်ပြုန်းပွဲ နှင့် အကယ်၍ သာ
၀ါခေါင်လဆန်းလာပြီ ဆိုတော့ နတ်ပွဲ ရာသီ ရောက်လာခဲ့ ပြန် ပါပြီ။
တောင်ပြုန်း ... ပြီးရင် ... ရတနာ့ဂူ ..
မန်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀ ကို ပြန်သတိရ သွား မိတာမို့ စိတ်ကူးထဲ ရောက်လာခဲ့တဲ့ .. ဒုတိယ နှစ် ကျောင်းသား ဘ၀ ကအဆောင်နေ သူငယ်ချင်း တွေ နဲ့ နတ်ပွဲ သွား ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်း ပြန်ချ ရေး ကြည့် လိုက် ပါ တယ်။ ..
သူရာရည် ကြိုက် တတ်ကြ တဲ့ နတ် တွေ ကို အဓိက ထား ပူဇော် ပသ ကြတဲ့ ပွဲဖြစ်တာ မို့၊ လိုက်လျော ညီထွေ လည်းဖြစ်အောင် .. နဂိုလ် ကတည်း က လည်း ကြိုက်တိုက်တိုက် ဖြစ်တဲ့ ... ယမကာ လေးများ လည်း ကျနော် တို့ တက်ညီ လက်ညီ သုံးဆောင် မှီဝဲ သွား ကြပါတယ်။ ပွဲတော်လာ လူငယ် အမျိုးသား အများစု နည်းတူပေါ့ ... ပွဲထဲ ရောက်တော့ ဆိုင်းသံ ကြားတာ နှင့် အရှိန် က ရထားပြီး သားမို့ .. လက်တွေ က လေထဲ ရောက်နေပြီ ...
အဲဒီ တုံးက နန်းတွေ မှာ လူဝိုင်းအုံကြည့်ကြ တဲ့ နတ်ကတော် တွေ ကတဲ့ ၀ိုင်း တွေ ရယ်... ဘယ်သူမှ ဂရုစိုက် ပြီး မကြည့် တဲ့ ကျနော် တို့လို ငမူးတွေ ကတဲ့ ၀ိုင်း တွေ ရယ်လို့ ရှိ ပါတယ်။ နတ်ကတော်တွေ ကတဲ့ ၀ိုင်း ရဲ့ အပြင် ဘက်ကနေလည်း က လို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့လို မူးမူး နဲ့ လူငယ်တွေ ပျော်ပျော် ကတဲ့ဝိုင်း ကတော့ နတ် နန်း မရှိတဲ့ ဆိုင်းဝိုင်း တ၀ိုင်းပါ လူငယ်တွေ အတော် များများ ခုန်ပေါက် က ပြီး ပျော်ကြတာပါ ။ ဆိုင်းဆရာ ကို " ဆိုင်းဆရာ ရေ ..၁ကျပ်ဘိုး တီးပါ ဦး " ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ ၁ကျပ် ပေးပြီး က လိုက်ကြ .. က နေလို့ကောင်းတုန်း ဆိုင်းက ဗြုန်း ဆိုရပ်သွား .. ဆိုင်းဆရာ ကို ၁ကျပ် ထပ်ပေးပြီး ၁ကျပ် ဘိုး တီးပါဦး ဆိုပြီး ... က လိုက် ကြရင်း ... အရက် ရှိန်ကျ အမူး နည်းနည်း ပြေလာရင် .. နတ်ကတော် တွေ ဆီသွား ပြီး ..အရက် တောင်း သောက် လိုက်ကြ ရင်း ...
အမှတ်တရ တခု ကတော့ ကျနော်တို့ အုပ်စုထဲ က ကျောက်ဆည်သား ဖက်တီး ခင်မောင်စိုး ခုန်ပေါက် ကတာ အကျမတော် တော့ ဖနှောက်ရိုး အက် သွားပြီး ကျောက်ပတ္တီး စည်း လိုက်ရ တာပါဘဲ။
နောက်ပိုင်းတော့ တခေါက် မှ ထပ်မရောက် ဖြစ်တော့ပါ .. နှစ် တွေဟောင်း .. ခေတ်တွေလည်း ပြောင်း ပြီး ... ၁ ကျပ် ဆိုတာ ...ခု ဆို .. အစိမ်းရောင် ခြင်္သေ့ တကောင် နဲ့ ညီ နေလောက် ပါပြီ ။
တောင်ပြုန်း နတ်ပွဲ .. ဖြစ်ပေါ် လာတာက ...
အနော်ရထာ မင်း က ကွပ်မျက် လိုက်ပြီး .. ရွှေဖျဉ်း ညီနောင် အတွက် တောင်ပြုန်း အရပ် (အုတ်၂ချပ် လှပ်ရာ) ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားအနီးတွင် နတ်နန်း ဆောက် ၍ ဒေသ အနီး အနားမှ လူများ ကို ပူဇော် ပသစေ ခဲ့ရာမှ အစပြု ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည် တဲ့။
စိတ်ကူး နဲ့ နည်းနည်း ချဲ့ ရေးကြည့် ရရင်တော့..
ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တ ညီအကို ၂ယောက် ကုလားပြည် က (၀က်သား မစားဘူး ဆိုတော့ ပင်လယ် နဲ့လည်းနီး မြန်မာပြည် နဲ့ ကပ်နေ တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ ကလည်း ဖြစ်နိူင် တာဘဲ) .. သင်္ဘော နဲ့ ထွက်လာ တာက စ တာပါဘဲ။ မှတ်မိသလောက် ဆိုရင် ..
သင်္ဘောပျက် တော့ ပျဉ်ချပ် လေးတွယ် ပြီး သထုံပြည် ကိုရောက် ..( ခုတော့ သထုံ က ပင်လယ် နဲ့ အဝေး ကြီး) ဘုန်းကြီး တပါး ဆီ ရောက် ဘုန်းကြီးကျောင်းသား လုပ်နေ ရင်း .. တနေ့ ဘုန်းကြီး ယူလာ တဲ့ ဇော်ဂျီ အသေကောင် ကို ဘုန်းကြီးက စားဘို့ ဘာဘီကျု လုပ်ထား တာ အနံ့ မွှေး လှတာနဲ့ ဗျတ် ဘရားသားစ် အကုန်စား လိုက်ကြတော့ ... ၂ယောက် လုံး ဆူပါမင်း တွေ ဖြစ်ကုန် သတဲ့ ... အဲဒီမှာ သထုံ ဘုရင် .. ကြားပြီး အာဏာ ကို ဖြတ်လမ်းက ယူချင်ကြတဲ့ .. လူစွမ်းကောင်း ၂ယောက် ဖြစ်လာ နိူင်တာ မို့ .. ပုဒ်မ စုံ သုံး ပြီး ဖမ်းဆီး နှိပ်ကွပ် တာမှာ ဗျတ်ဝိ တော့ သေသွား ပြီ ကိုဗျတ္တ ကတော့ ပုဂံဘုရင် ဆီ ထွက်ပြေးနိူင်ခဲ့သတဲ့ ..
ပုပ္ပား နဲ့ ပုဂံ တနေ့ ၉ခေါက် ပန်းတော်ဆက် တဲ့ ကိုဗျတ္တ နဲ့.. သွားတက် ခတ်ကြီးကြီး လေး ပါတဲ့ ပုပ္ပား သူ မယ်ဝဏ္ဏ တို့ ချစ်ကြိုးသွယ် နှောင်မိကြ.. ရွှေဖျဉ်းညီနောင် ဖွားလာ ....ပြီး သား ၂ယောက် ကို အနော်ရထာမင်း က စစ်မှုထမ်း ဘို့ ဆင့်ခေါ် (မယ်ဝဏ္ဏ ရင်ကွဲနာကျ သေ) ..
ရွှေဖျဉ်းညီနောင် က ဥတည်ဘွား လည်ပင်း ကို ထုံး ၃ရစ်တားခဲ့ တဲ့.တရုတ်ပြည် ခရီးက အနော်ရထာမင်း နှင့် အပြန် . တောင်ပြုန်းဒေသ မှာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားတည်စဉ် ..သောက်စားမူး ပြီး အုတ်၂ချပ်လှပ် အမှုထမ်း လှစ်ဟင်းသော ကြောင့် ..(ရွှေဖော့ရိုး နဲ့ ရိုက် စေ ဆိုတာကို) ကွပ်မျက် ခံရတာ .. ကနေ စတာ ပါ။
ဗျတ် ညီအကို ကုလားပြည် က မထွက် ဖြစ်ခဲ့ရင်..
သင်္ဘော မပျက်ခဲ့ရင် ..
သင်္ဘောပျက် ပြီး သထုံပြည် မရောက်ခဲ့ ရင် ...
ဘုန်းကြီး ရဲ့ ဇော်ဂျီ အသေကောင် သား မစားမိခဲ့ရင် ..
မယ်ဝဏ္ဏ နဲ့ ပန်းတော်ဆက် ကိုဗျတ္တ မဆုံခဲ့ရင် ..
ရွှေဖျဉ်း ညီနောင် အရက် မမူး ခဲ့ရင် ..
ရွှေဖျဉ်း ညီနောင် ကို . အနော်ရထာ ရဲ့ အမိန့် အတိုင်း ဖော့ရိုးလေး နဲ့သာဘဲ ရိုက်ပြီး အပြစ်ပေးခဲ့ရင် ...
ခဲ့ရင် ... ခဲ့ရင် ...
တောင်ပြုန်းပွဲ ... ဆိုတာ?
ပူနောင် ဂျပ်ဂျိန်း .... ပူဂျပ် ဂျိန်း .. ဆိုင်းချက် တွေ နဲ့ ...
ကျနော် က ဘူး ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါချေ ...
(ဓါတ်ပုံ များ GOOGLE မှ ယူပါသည်)
Posted by mks at 10:53 PM6comments: Links to this post
Alahmak, I kena fine.
အလုပ်ထဲ က မလေး Site supervisor တယောက် ကျနော် နှင့် စကား လာပြောတာပါ။
Kena ဆိုတာ မလေး စကား ဖြစ်ပါတယ် .. ထိသည်၊ မိသည်၊ စသည့် အဓိပ္ပါယ် များ ပေါက်ပါ တယ် ။
Kena caught, kena sacked, kena 4D ... စသဖြင့် .. kena 4D ဆိုတာ ဂဏန်း၎လုံး ထီ ပေါက်တာပါ..
စလုံး မှာတော့ Kena ကို တရုတ်လည်းပြော ကုလားလည်းပြော ဘန်းစကား တခု ဖြစ်နေပြီး ခုလည်း သူ fine ချခံ ရကြောင်းပြောပြ နေ ခြင်းပါ။
၀ုလင်း ဘူတာရုံ က ဆင်းလာ ကြပြီး .. သူ့မိန်းမ Causeway Point မှာ ဈေး ၀ယ် နေတုံး .. သူက လူရှင်း သည့် တနေရာ မှာ စီးကရက် သွား သောက် .. ပြီးတော့ စီးကရက်တို နဲ့အစီခံ ကို ကြမ်းပေါ် သို့ လွှင့်ချ လိုက်သတဲ့။ လူလည်း ရှင်း အမှိုက်ပုံး လည်း မရှိ ပါတဲ့။ လူတယောက် ပေါက်ချ လာပြီး NEA မှ ဖြစ် ကြောင်း ကဒ် ထုပ်ပြ ကာ သူ့ ရဲ့ မှတ်ပုံတင် တောင်းပါသတဲ့ ... ( သူတို့ မှာ ဖမ်းခွင့် ၀ရမ်း တပါတည်း ပါကြတယ် တဲ့ ) မှတ်ပုံတင် ထဲက နာမည် နံပါတ် လိပ်စာ များဖြင့် fine တပ် သည့်စာရွက် တရွက် ပေးကြောင်း နှင့် AXS machine မှာ Fine ၃၀၀ ဒေါ်လာ ဆောင်ခဲ့ရ တယ် ဆိုပါတယ်။
(The lack ofatrash can was no excuse to litter).
အမှိုက် ပစ်လို့ ဒါဏ်ရိုတ် ခံကြ ရတာတွေ အများကြီး ကြားဘူး ခဲ့ပါတယ် ..
စီးကရက် သောက်ပြီး လွှင့်ပစ်လို့ fine 300$ (အရင်က 200$ ကနေ မြှင့်လိုက် တာပါ) ဆောင်ရသူ ..
စားသောက်ဆိုင် မှာ ခေါက်ဆွဲ စားဘို့ တူ ယူပြီး တူထည့်တဲ့ စက္ကူအိပ်လေး ကို ကြမ်းပေါ် ချလိုက်မိ လို့ fine 300 ဒေါ်လာ ဆောင်လိုက် ရတဲ့ သူ (စားပွဲပေါ် တင်ထားရင် တောင် စားသောက်ပြီး သွားချိန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားတွေ လာသိမ်းမှာပါ၊)
ည ၈နာရီ လောက် ကြီး မှာမှ တံတွေးထွေး မိလို့ fine 150 ဒေါ်လာ ဆောင်ရသူ ...
အိန္ဒိယ လုပ်သား တယောက် ပြောပြဘူး တာက .. စနေည တည နက်ဖန် Sunday အလုပ် ပိတ်တာ မို့ အရက်သောက်ပြီး ခတ်ထွေထွေ နဲ့ အဆောင် ပြန်အလာ ... အဆောင် နားရောက်တော့.. လမ်းဘေး သစ်ပင် တပင်အောက် မှာ လောလောဆည် ကမှ ထသွား ကြဟန် ရှိတဲ့ မြေကြီးပေါ် က ၀ိုင်းတ၀ိုင်းက Coca Cola ပုလင်း တ၀က် လောက် ကျန်နေသေး တာ တွေ့တာနဲ့ ယူ ဖွင့် မော့လိုက်ပြီး .. ပြန်ချထား လိုက်သတဲ့ .. သူ ထပြီး ဆက် အလျှောက် .. လူတယောက် လာခဲ့ ပြီး NEA က ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ IC တောင်းတော့ .. သူ့ ပစ္စည်း မဟုတ်ပါ ကြောင်း ရှင်းပြလို့ လည်း မရ .. ဒါဏ်ငွေ ၃၀၀ ဒေါ်လာ ထိခဲ့ ကြောင်း .. ဆိုပါတယ် ..
ကုလားလေးက ကျနော့်ကို သတိတောင် ပေးလိုက် သေးဗျ .. မင်း ရထား၊ ကား ၊ Bus stop ထိုင်ခုံတွေ ပေါ်မှာ သတင်းစာ တို့ တွေ့ တောင် ကောက် မဖတ်နဲ့ ... ဖတ်ပြီး ရင်လည်း အဲဒီ နေရာမှာ ပြန်မချ ခဲ့ဘဲ .. အမှိုက်ပုံး ထဲ သွားပစ် ပါတဲ့။( သူများ အမှိုက် က ကိုယ့် အမှိုက် ဖြစ်သွား မယ်လေ )
NEA website ထဲမှာ လျှောက်ဖတ် ကြည့် တာ..
အမှိုက်သေးသေး မွှားမွှား လေးများ .. ဥပမာ .. တစ်ရှုးပေပါ၊ စီးကရက်တို၊ ချိုချဉ်စက္ကူ၊ ဘတ်စကားလက်မှတ်၊ မီးခြစ်ဆံ၊ ကားပါကင်ကူပွန် ဖောက်စာ (Carpark coupon tab အချင်း ၅ မီလီ လောက်ရှိ တဲ့ စက္ကူစ လေးတွေ) တွေဆိုရင် ပထမ အကြိမ် ပစ်သူ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ဒု အကြိမ် ပစ်ရင် တော့ fine ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အပြင် CWO ( Corrective Work Order ) ဆိုတဲ့ လူမြင်ကွင်း မှာ အမှိုက်ကောက် တံမျက်စည်း လှည်း တရက် (၃နာရီ) လုပ်ရမတဲ့ ...
ကုတ်ဘူး ဘီယာဘူး (Drink can)၊ ပုလင်း နှင့် အခြား အရွယ်စား ပိုကြီးတဲ့ အမှိုက် တွေပစ်ရင်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ နဲ့ CWO ပါ။ (Small Items လို့ မသတ်မှတ်ပါတဲ့)
တံတွေး ထွေးရင် ဒေါ်လာ ၁၅၀ .. ဟိုကြား ဒီကြား ရှုရှုး ပန်းရင်လည်း ၁၅၀ ပါတဲ့....
ကွမ်းထွေး ရင် ၁၅၀၊ ဒါက spitting offence အနေ နဲ့ဆိုရင်ပေါ့ ... နံရံ သွားထွေး ပြီး ကွမ်းသွေးအနီကြီး ပေကျန် ခဲ့လို့ ရစ်ပြီး Vandalism ဆိုတာကြီး နဲ့ တံဆိပ်ကပ် လိုက်ရင်တော့ အဲဒီအတွက် ဒါဏ်ငွေဟာ ၂၀၀၀ အထိ (သို့) ထောင် ၃နှစ်အထိ (သို့) ကြိမ်ဒါဏ် ၈ချက် အထိ .... ဖြစ်သတဲ့ ...
NEA က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပြင် .. ရဲ၊ လုံခြုံရေးအစောင့်၊ ပန်းခြံအစောင့်၊ ရထား နှင့်ဘူတာဝန်ထမ်း များ၊ ဟာလည်း အမှိုက် ပစ်သူတွေ ကို အရေးယူ နိူင်ပါသတဲ့။
သူတို့တွေ ကလည်း ယူနီဖောင်း အပြည့်နဲ့ လူလုံးပြနေ တာတွေ့ရလေ့ မရှိပါဘူး .. Ambush အငိုက်ဖမ်း ကြတာ များပါတယ်။
Ambush လုပ်တတ် ကြတဲ့ ရွာက ဘဲဥ တွေလိုပေါ့ ... ကားမောင်းသွားရင်း မီးပွိုင့်ကြီး စိမ်းနေတာ ဖြတ်မောင်းလာ .. ဖြတ်ဖြတ်ချင်း ၀ါရော .. ပြီး ချက်ခြင်း မီးနီ ... ကားက လမ်းလယ် ရောက်နေပြီ .. ဆက်မောင်း လိုက်တာ ... ဘယ်ချောင် ကထွက်လာ မှန်းမသိတဲ့ မော်တော်ပီကယ် ၃-၄ ယောက် ...တား .. လိုင်စင်ပေးပါ.. (ရုံးသွား ရင်တသောင်း + အချိန်) ... ၅၀၀၀ - ၆၀၀၀ လောက် နဲ့ ဆစ်လို့ ရတတ် ပါတယ် ။
ကဲ ဆရာတို့ .. စီးကရက် သောက်ပြီး ထောက် ကနဲ တောက်ပြီး လွှင့်လိုက်တာ ဟာ ... ဒေါ်လာ ၃၀၀ ကို ထောက် ကနဲ လွှင့်လိုက် သလိုလည်း ဖြစ်သွား နိူင်တာမို့ ...
..... ငှက်ပျောသီးများ ..စားတဲ့ မိတ်ဆွေ များ ... ပေတရာ ပေါ်မှာ မပစ်နဲ့ ငှက်ပျောခွံများ ...
(ဓါတ်ပုံ Google မှယူပါသည်)
Posted by mks at 10:37 PM No comments: Links to this post
စိုးပိုင် - နေခြည်ထိပ်ထား
Posted by mks at 11:11 PM 1 comment: Links to this post
ငယ်တုံးက ကျနော်တို့ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် မိဘတွေက.. ဦးချစ်ထူး နာဂ၀ီသ ငန်းဆေး ကို ကွမ်းရွက်ပြုတ်ရည် နဲ့ရော၊ ဖာတိပ္ဖိုလ်သီး ခြစ်ထည့် သံပူသတ်ပြီး တိုက်ပါတယ်။ အဖျားကြီးရင် ၀ံသည်းခြေ အနည်းငယ် ထည့် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ .. တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ ဘဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။
တခါတလေ ကလောကမီးရထားဆရာဝန် ကြီး လာရင် အိမ်ပင့်ကြ တာမျိုးတော့ ရှိပါတယ် ..
အဲဒီတုံးက အောင်ပန်းတိုက်နယ် ဆေးရုံမှာ အောင်ပန်းသူ အောင်ပန်းသား တွေ ဆေးသွား သွား ပြီးတောင်းကြပါတယ် ...
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပြား၊ အားဆေးပြား၊ အစာကြေဆေးရည်၊ တင်ချာ၊ ပတ်တီး ပလာစတာ စသည်ဖြင့် ... ဆေးရုံမှတ်ပုံတင်စာအုပ်နဲ့ အခမဲ့ ဝေပါတယ်။
အမျိုးသားဝါဒ် အမျိုးသမီးဝါဒ် ကားရပ်ဖို့နေရာ၊ပန်းခြံ၊ စိန်ပန်းပြာပင် ချယ်ရီပင် ၀က် သစ်ချပင် တွေနဲ့ ကုန်းထိပ်မှာ ဆေးအဖြူရောင်သုတ်ထားတဲ့ အောင်ပန်းတိုက်နယ် ဆေးရုံဟာ ကြည့်ရတာ မျက်စိပသာဒလည်း ရပါတယ်။ မနက်၊နေ့၊ည တရက် သုံးနှပ်ကြွေးပြီး အခမဲ့ဆေးကု ပေးတယ် ဆိုတာ အခုဘက်ခေတ် မှာတော့ သမိုင်း လိုလို ပုံပြင်လိုလို ဖြစ်များနေပြီလား ... မိခင် နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးက UNICEF နိူ့မှုန့်တွေ အခမဲ့ဝေတာလည်း မှတ်မိပါသေးတယ်။
ခေတ်စနစ်နဲ့ အချိန်ကာလတွေ ရွေ့လျား ပြောင်းလည်း နေတာနဲ့အတူ စီးပွားဖြစ်(စီးပွားပျက်) ကျမ္မာရေးဝန်ဆောင်မူ့ ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေ လည်းပေါ်လာပါတယ်။
တနေ့မှာ အလျိုလျို ထွက်သွားကြရမယ် ဆိုပေမဲ့ ဘ၀တဏှာ ဆိုသလို နေရတဲ့ တဘ၀၊ ရသလောက်လေး ဆွဲဆန့်ထားချင်ကြတာပေါ့ ...သူ့အချိန်ကျပြီ ဆိုရင်တော့လည်း ဘယ် ပါရဂူသမားတော် နဲ့ကုကု သွားရတော့တာပါဘဲ..စပါယ်ရှယ်လစ် ဆိုတာ တန်ခိုးရှင်တွေ မှ မဟုတ်ကြတာလေ..
ဇော်ဂျီဖိုလ်ဝင်သား ဆိုတာ ဒီခေတ် မှာတော့ "ပိုက်ဆံ" လို့ပြောရမလားဘဲ......
စင်ကာပူနိူင်ငံ ရဲ့အထူးထင်ရှား၊ လူသိများ သော ခွဲစိတ်အထူးကု အမျိုးသမီးဆရာဝန်ကြီး တဦး .. ဘရူနိူင်းတော်ဝင် မိသားစုဝင် တဦးအပေါ် ဆေးဘိုးဝါးခ တောင်းခံမူ့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ ၂၃-၀၂-၁၁ သတင်းစာ ကစပြီး ပါလာပါတယ်။
အဆိုပါဆရာဝန်ကြီးဟာ နာမည်ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး ..အာရှ ရဲ့ ပထမဆုံးနှင့် အသက်အငယ်ဆုံး အသည်းအစားထိုး ခွဲစိတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ထူးချွန်ဆရာဝန်ကြီး တဦးဖြစ်ပါတယ် လို့ ၀ီကီ စာမျက်နှာ မှာပါပါတယ် .
ဘရူနိူင်း နိူင်ငံဘုရင်ရဲ့ ညီမ၀မ်းကွဲတော်စပ်သူလည်းဖြစ် ဘရူနိူင်းမိဘုရားကြီးရဲ့ ညီမငယ် လည်းဖြစ်တဲ့ လူနာ ဟာ ဟာ ရင်သားကင်ဆာ အတွက် ဆရာဝန်မကြီးရဲ့ စောင့်ရှောက်ကုသမူ့ ခံယူခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ သြဂုတ်လအစောပိုင်း မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဆေးကုသ စရိတ်တွေကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၇ အထိ ပေးချေ ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသတဲ့ ..
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ၂၀၀၇ နှစ်စပိုင်း မှ ဇူလိုင်လ အထိ ၇-လစာ အတွက် ဆေးဘိုး+၀ါးခ ကျသင့်ငွေ တောင်းခံလာတော့..ဘရူနိူင်းကျမ္မာရေးဌာန မှ စင်္ကာပူကျမ္မာရေး ၀န် ကြီးဌာန ကို ဘီလ်တွေဟာ reasonable ဖြစ်မဖြစ် တင်ပြ မေးမြန်းလာပါတယ် .. ဘီလ် တွေကြည့်ပြီး စင်္ကာပူ ဘက်မှလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်သွားရတယ် ဆိုပါတယ် .. ၇-လအတွက် ဆေးဘိုး+၀ါးခ က စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၄.၈သန်း ( နောက်ပိုင်းမှာTax အပါ ၂၆သန်းလို့လည်းရေးပါတယ်) ပါတဲ့။
ဆရာဝန်မကြီး လည်း ချက်ခြင်းဘဲ ဘီလ် ကို ထက်ဝက် ခန့်အထိလျှော့ပေးလိုက်ပြီး ..နောက်ထပ် 3rd party ဆရာဝန်တွေကိုပေး ရန်အတွက် သာ ဆိုပြီး ဒေါ်လာ ၃.၂၅သန်း ဘဲပေးတော့ဘို့ နဲ့ ၊ နောက်ဆုံးတော့ဘရူနိူင်း ဘက်မှ ဘီလ် တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမူ့ကိစ္စ အားလုံး ရပ်တန့်ကြေအေးမယ်ဆိုရင် ဘီလ်တွေ အားလုံး ကို လျော်ပစ်မယ် ဆိုတဲ့အထိ ဆရာဝန်မကြီးက ကမ်းလှမ်း ပါတယ် လို့ အစောပိုင်း သတင်းများမှာ ပါပြီး ကမ်းလှမ်းချက် ကို တဖက်မှ လက်မခံ ခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်း သတင်းများ မှာတော့ အဲဒီလို ကမ်းလှမ်းတယ် ဆိုတာ မမှန်ပါ ဘူးလို့ ညင်းဆိုကြောင်း သတင်းတွေမှာ ပါပါတယ်။ (စလုံး ဆေးကောင်စီ နှင့် ဆရာဝန်မကြီး တို့ တရားရုံးမှာ တရားဆိုင်နေကြပါတယ်)
အခြားသော စပါယ်ရှယ်လစ်ဆရာဝန်များနဲ့ ပြသဆေးကုသမူ ခံယူရာမှာ ၄င်း ဆရာဝန် များမှ ကျသင့်ငွေတောင်းခံလွှာတွေ ကို အဆိုပါ ဆရာဝန်မကြီးထံဘဲ တင်ကြ ပါတယ်.... ဒီလိုတင် လာတဲ့ ဘီလ်တွေ ကို လူနာဘက်ကို ပြန်တောင်းတဲ့ အခါမှာတော့ ကျသင့်ငွေ တွေကို ပိုတင်ပါသတဲ့ ... ဥပမာ ...စပါယ်ရှယ်လစ်ဒေါက်တာ တဦးရဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘီလ် တစောင် ကို (အဆ ၅၀၀ တင်ပြီး) ဒေါ်လာ ၂၁၁,၀၀၀ လို့တောင်းကာ .. နောက်ထပ် သူမကိုယ်တိုင်အတွက် (ကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်ခခေါ်မလား) ဒေါ်လာ၃၀၅,၈၀၀ ထပ်ဆောင်းပါတယ်တဲ့ ... ဒီတော့ ၄င်း စပါယ်ရှယ်လစ်ဒေါက်တာနဲ့ ပြသကုသတဲ့အတွက် (ဒေါ်လာ ၄၀၀ဟာ) ကုန်ကြစရိတ် ၅၁၆,၈၀၀ ဒေါ်လာ ကျသွားတဲ့ သဘောပါ။ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ဘီလ်တစောင် ဟာလည်း ဒေါ်လာ၂၈၅,၀၀၀ လို့ တင်ထားသတဲ့ ..
အဲဒီ ၇ လစာ အထွေထွေ ဆေးဘိုးဝါးခ စင်ကာပူပိုက်ဆံ ၂၆သန်း ကို ပေါက်ဈေး နဲ့ တွက်ကြည့်တော့ မြန်မာငွေ ၁၈.၂ ဘီလီယံ ရှိနေပါတယ် ... ကျွတ် ကျွတ် ... (ရိတ်ချက် ရိုတ်ချက် တယ် ပြင်း )
ကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံ က အတော်အသင့် ချမ်းသာကြသူများရော မတရားချမ်းသာကြသူ များပါ စင်ကာပူ မှာ ဆေးလာကု ကြပါတယ် ... ၁၈ဘီလီယံ ဆိုတာ Peanuts ပါလေ ..
ကိုယ်လို သာမာန် ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းတယောက် အနေနဲ့ကတော့ ကျပ်၁၈.၂ဘီလီယံ ကို (၁၈) ဘ၀ စုတောင် မရနိူင်တာမို့ ...ငယ်ဘ၀ ကုထုံးတွေဘက် ယူတန်း (U-Turn) တန်း လို့ ....
နာဂ၀ီသငန်းဆေး သောက်၊ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ တပင်တိုင်မြနန်းဥ ရှာလိမ်းပြီး ယမမင်း နဲ့ Negotiate လုပ် ဘို့သာ ရှိပါကြောင်း ...
(ပုံ Google မှ ယူပါသည်)
Posted by mks at 11:48 PM5comments: Links to this post
လာမည့် April လ မှာ ခရီးစဉ် စတင်ပြီး ပြေးဆွဲ တော့မည့် ထိုင်းနိူင်ငံ ရဲ့လေကြောင်းလိုင်း အသစ်
PC Air မှ ပြိုင်ဘက်များနဲ့ မတူ ခြားနား ရလေအောင်..
လေယာဉ်မယ် လို့ ပြောရမလား လေယာဉ်မောင် လို့ဘဲ ပြောရမလား ...??
Transsexual Cabin Crew တွေ နဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်လာ တယ် ဆိုတဲ့
11 Feb 11, The Straits Times သတင်းစာ မှာ ပါလာ တဲ့ သတင်းတိုလေး ပါ။
အလုပ်ထဲက တယောက် ကတော့ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပါဘဲ.. " ယပက်လက် ဖဖခ တွေကတော့
လက်လန်တယ် ... ပြင်ထားတာများ မှုံနေတာဘဲ .. ချောချက်ကလည်း တကယ့် မိန်းမတွေ လား ငေးယူရတယ်..."
တနှစ်တကြိမ် နှစ်နှစ် တကြိမ် ရွာအသွား-ပြန် ခရီးတွေမှာ ဆုံနေကြ ဣနြေ္ဒကြီးလှစွာသော ..
မမလေး များနဲ့ PC AIR မှ မွမွလေး များ ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု တွေ.. ဖော်ရွေပျူငှာ စိတ်ရှည် မှု့ ..
အက်တီကျု များ ဘယ်လို တူညီ ကွာခြား မှာလည်းလို့ စပ်စုချင်စိတ်နဲ့ ...
PC AIR ရန်ကုန်ခရီးစဉ် ဆွဲ လို့ ကတော့ ... အားကိုပေးလိုက်ဦးမှာ...ဗျား
Posted by mks at 11:51 PM2comments: Links to this post
2010 ကုန်သွားပြန်ချေပြီ ...
နံရံ မှာ ပြက္ခဒိန် တခု ပြောင်းချိတ်ရဦးမှာဘဲ ..
ပုံမှန်အတိုင်းသွားနေတဲ့ အချိန်တွေကို ပိုမြန်နေသလိုလို စိတ်ထဲမှာထင်နေမိသေး။
ပျမ်းမျှ လူ့သက်တမ်း ၇၅နှစ် ...ထား
သက်တမ်းစေ့နေနိူင် ရင်တောင် .. ရက်ပေါင်း ၂၇၃၇၅ ရက်
လက်ကျန်ရက်တွေ နည်း နည်း လာနေပြီ။
New Year Countdown တွေ လုပ်ကြသည် ..
Just Another Day / Year???
New Life Countdown တော့ ဘယ်သူမှမလုပ်ကြ
နောက်နှစ် ကတော့( Apocalypse 2012) ဆိုတဲ့ 2012
ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကြိုကြ မှာ ပါလိမ့် ..
ကြိုနေကျ ပုံမှန် အတိုင်းဘဲ ကြိုကြ မှာပါလေ ..
BBC ဦးဖေသန်း စကား ငှားသုံး ပါရစေ ..
ဆုံကြဦးမယ်လေ ၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ..
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ပါ ခင်ဗျား ..
Posted by mks at 12:01 AM3comments: Links to this post